iPhone White ihuenyo Ọnwụ? - Ị nwere ike idozi ya na 3 nkeji!
iPhone (iOS 9): Olee otú Idozi White ihuenyo nke Ọnwụ
Ọdịdị nke a na-acha ọcha na ihuenyo, mgbe ụfọdụ, na-apple logo na ya na ihe iPhone (gụnyere iPhone 6s na 6s Plus), iPad ma ọ bụ iPod a maara dị ka na-acha ọcha na ihuenyo ọnwụ. Na-acha ọcha na ihuenyo ọnwụ nwere ike mere ruru ọtụtụ ihe. Ụfọdụ n'ime ndị a na-ngwaike, ndị ọzọ software. Ọtụtụ n'ime ndị ugboro, na-acha ọcha na ihuenyo ọnwụ na-egosi na ihe ma na-ejikarị arụ ọrụ ekwentị esighịkwa a dobe on a ike n'elu.
E nwere ọtụtụ ụzọ na-aka na-acha ọcha na ihuenyo ọnwụ ọnọdụ. Otu nwere ike mgbe niile na-eleta onye Apple ụlọ ahịa na-ngwaọrụ-enyocha ma na rụziri ma ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike imeli akwụ $ 199 na ndị ọzọ n'ihu. Obodo idozi ụlọ ahịa nwekwara ike ịrụzi a ngwaike mere na-acha ọcha na ihuenyo ọnwụ ma mgbe ọ na-abịa software, ndị ọrụ adịghị nwere ọtụtụ nhọrọ na-atụ anya. Wondershare N'ihi ya ka, ẹkenam Dr.Fone nke nleghari nile software nsogbu nke iOS ngwaọrụ na ike mfe inyere ịrụzi a glitch na sistemụ arụmọrụ.
Wondershare Dr.Fone Maka iOS e mere iji nyere ndị ọrụ na-agbake ha iPhone, iPad ma ọ bụ iPod si a na-acha ọcha na ihuenyo ọnwụ. Ọ dị mfe iji, na iche site gwara na-acha ọcha na ihuenyo ọnwụ, o nwere dịgasị iche iche nke ndị ọzọ exiting atụmatụ nakwa. Wondershare Dr.Fone Nwere ike iji na-aghọ ihe iPhone azụ ụlọ ọrụ ntọala, iji weghachi gbajiri ngwaọrụ, naghachi ihe iPhone azụ mgbe a usoro okuku ma ọ bụ n'ihi ROM na-egbu maramara. Ọ bụ ihe magburu onwe data mgbake software maka iOS ngwaọrụ na-ahapụ ọrụ naghachi ehichapụ ozi ederede, foto, na ndetu, olu memos na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọzọkwa, ọ na-ahapụ ọrụ naghachi data si iCloud na iTunes dị ka mma.
Iji malite agbake ngwaọrụ gị si na-acha ọcha na ihuenyo ọnwụ iji Wondershare Dr.Fone maka iOS (maka iOS 9), na-eso ntụziaka ndị a:
1. Download na wụnye Wondershare Dr.Fone gị Windows ma ọ bụ Mac OS kọmputa. Mgbe nwụnye zuru ezu, jikọọ gị iOS ngwaọrụ gị na kọmputa site n'ọnụ eriri USB na ẹkedori Dr.Fone.
2. site na isi window, họrọ "Idozi iOS ka Nkịtị" emi odude ke n'elu aka nri nke ihuenyo. Chere maka Wondershare Dr.Fone ịchọpụta gị iOS ngwaọrụ. Pịa "Malite" Ozugbo ngwaọrụ e achọpụtara.
3. Iji idozi gị iOS, Dr.Fone ga ibudata ọhụrụ version gị femụwe mgbe ịchọputa gị ugbu a iOS version. Kụrụ "Download" na-eche maka download mezue.
4. Ozugbo download completes, Wondershare Dr.Fone ga-amalite ịrụzi gị iOS (iOS 9 na-akwado). Ọ ga-eme ihe dị mkpa iji na-enweta ngwaọrụ nke na-acha ọcha na ihuenyo ọnwụ mode na-enweghị na-ebibi gị data. N'ihe na-erughị nkeji 10, ị ga-a ozi na-ekwu na ngwaọrụ gị na-ibidogharịa nkịtị mode.
Ọ bụrụ na i sowo niile n'elu kwuru banyere ntụziaka ọma, gị iOS ngwaọrụ ga-elu na-agba ọsọ n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ikpe, ọdịdị nke kpatara na emewo ka ngwaọrụ gị nwere a na-acha ọcha na ihuenyo ọnwụ nwere ike ịbụ ngwaike metụtara. Iji nweta ngwaike nsogbu ota, ị ga-mkpa na-eje ije gị obodo Apple ahịa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ Apple ngwaọrụ arụzi dị ka kwa na gị onwe gị mma.
Download free ikpe version na-agbalị ya site onwe gị ugbu a.
Olee otú zere na-iPhone n'ime na-acha ọcha na ihuenyo ọnwụ
1. The kasị mkpa ma mfe atọ iji gbochie na-gị iPhone (gụnyere iPhone 6s na iPhone 6s Plus) n'ime na-acha ọcha na ihuenyo ọnwụ bụ na-ezi na-elekọta ya. Adịghị dobe ya; ma ọ bụrụ na butterfingers-agba ọsọ na ezinụlọ, na-edebe ya n'ime gị n'akpa uwe dị ukwuu dị ka i nwere ike.
2. Zụrụ a na-echebe ikpe na ogologo n'ọnụ iji gbochie kpọmkwem na kọntaktị nke ekwentị na elu na ọ dara na. Ntakiri mmetụta pụtara ntakiri Ohere nke ngwaike nhata dapụtara si dobe.
3. Mgbe ụfọdụ, mmezi nchegbu na batrị na ndị ọzọ na ngwaike akụ nke iOS ngwaọrụ nwere ike ịbụ na-akpata nke na-acha ọcha na ihuenyo ọnwụ. Ya mere, na-ezere iji ngwaọrụ maka abnormally ruo ogologo oge oge. Ọ bụrụ na ị na-achọpụta na ngwaọrụ na-kpo oku elu ma ọ bụ ịlụ rapaara ọ bụla ugbu a na, na, na-enye ya ụfọdụ ike.
4. Mechie ekwentị gị ugboro n'ọnwa na mgbe ahụ ka ọ laghachi azụ na mgbe 10 sekọnd. Ekwentị gị na-agba ọsọ na-abụghị nkwụsị n'ihi unu, fetches gị niile ozi ịntanetị, na-eme gị niile foto mma, ọ eleghị anya kwesịrị a obere ezumike. Nke a dị mfe ọrụ ga-enye ekwentị gị na oge na ọ kwesịrị ileda Ohere nke ọdịdị nke a na-acha ọcha na ihuenyo ọnwụ.
5. White ihuenyo nke ọnwụ na-bụghị mgbe niile mere site na-ezighị ezi ngwaike. Mgbe ụfọdụ, glitches na software ime ka ihuenyo na-aga ide na-acha ọcha enweghị ihe ọ bụla doro anya kpatara. Dị otú ahụ glitches na ahụkarị na iOS version n'okpuru iOS version 7. Ya mere, na-gị iOS ngwaọrụ emelitere ka ọhụrụ iOS 9 version.
10 Best Photo edezi égwu maka iPhone
> Resource> égwu> iPhone: Olee otú Idozi White ihuenyo nke Ọnwụ